သာမန်မဟုတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသောက်ပြီး အသက်ရှင်နေကြတဲ့ လူ ( ၅ ) ဦး - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingသာမန်မဟုတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသောက်ပြီး အသက်ရှင်နေကြတဲ့ လူ ( ၅ ) ဦး
သာမန်မဟုတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသောက်ပြီး အသက်ရှင်နေကြတဲ့ လူ ( ၅ ) ဦး
September 14, 2021 Yan Amazing 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ သာမန်မဟုတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသောက်ပြီး အသက်ရှင်နေကြတဲ့ လူတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့တွေက ဘယ်လိုမျိုး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အရာတွေကို စားကြလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ မီးသီးအလုံး ( ၅၀၀၀ ) လောက် ကို စားပြခဲ့သူ
ပထမဦးဆုံး‌ ပြောပြပေးမှာကတော့ မီးသီး အလုံးပေါင်း ( ၅၀၀၀ ) လောက်ကို စားပြခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုး မီးသီးတွေကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် စားပြခဲ့တဲ့ အမျိုးသားရဲ့ နာမည်ကတော့ Todd Robbins လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ Todd ဟာ ( ၁၉၈၀ ) ခုနှစ်တွေတုန်းက နိုင်ငံ အနှံ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မှော်ရှိုးပွဲတွေမှာ လှည့်လည်ပြသသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မီးလုံးတွေကို စားပြရာကနေ နာမည်ကြီးလာသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
Todd တစ်ယောက် မီးသီးတွေကို စားပြနေပုံက တစ်ချို့လူတွေ ပန်းသီး စားသလိုမျိုး အလွယ်လေး လုပ်ပြခဲ့တာပါ ။ လေ့လာသူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ သူ့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကာလတစ်လျှောက်လုံး မီးသီးအလုံးပေါင်း ( ၅၀၀၀ ) နီးပါးလောက် စားပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုး မီးသီးတွေ စားပြခဲ့လို့ Todd ဟာ ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်တာမျိုး မရှိပဲ မီးသီးတွေကို ကိုက်ရလို့ သွားကျိုးခဲ့ဖူးတာပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ဆိုဖာ အမြုပ်တွေကို စားတဲ့ အမျိုးသမီး
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ ဆိုဖာ ထဲမှာ ရှိတဲ့ အမြုပ်တွေကို စားရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမရဲ့ နာမည်ကတော့ Adele Edwards လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ Adele နှစ်ပေါင်း ( ၂၀ ) နီးပါးလောက် ဆိုဖာအမြုပ်တွေကို စားခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုး အမြုပ်လေးတွေကို စားရတာ အရသာတွေ့ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ရပ်တန့်လို့ မရအောင် စားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Adele ကပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
သူမ ဟာ တစ်နေ့ကို ခေါင်းအုံး တစ်လုံး နဲ့ ညီမျှတဲ့ အမြုပ်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်စွာ စားခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Adele ဟာ အစာအိမ်ရောဂါ ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားခဲ့ရတာကြောင့် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပါသေးတယ် ။ ဆေးရုံကနေ သက်သာလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ Adele တစ်ယောက် ဒီလိုမျိုး အမြုပ်တွေ စားတဲ့ အကျင့်ကို ဖြတ်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ လေယျာဉ်ပျံတွေကို စားတဲ့ အမျိုးသား
ဒီတစ်ခါ ပြောပြမယ့် သူကတော့ တစ်ခြားသူတွေ ထက် နည်းနည်း ထူးဆန်းပြီး လေယာဉ်ပျံတွေပဲ စားပြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ နာမည်ကတော့ Michel Lotito လို့ ခေါ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ အရာတွေကို စားရတာ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Lotito ကို လူပိုသိပြီး နာမည်ကြီးသွားစေခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ လေယျာဉ်ပျံ တစ်စင်းလုံးကို စားပြခဲ့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
( ၁၉၇၈ ) ခုနှစ်တုန်းက Lotito ဟာ Cessna ကုမ္ပဏီထုတ် လေယျာဉ်တစ်စင်းလုံး ကို စားပြခဲ့ပါတယ် ။ Lotito ဟာ လေယျာဉ် တစ်ခုလုံးကို စားဖို့အတွက် အစိတ်အပိုင်း သေးသေးလေးတွေ ခွဲပြီး စားခဲ့ကာ ( ၂ ) နှစ် အကြာမှာတော့ လေယျာဉ်တစ်စင်းလုံးကို ပြီးမြောက်အောင် စားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် Lotito ဟာ လူသိများ နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့အပြင် လေယျာဉ်တစ်စင်းလုံးကို စားနိုင်ခဲ့သူအဖြစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်လည်း တင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ကား တစ်စီးလုံးကို စားပြခဲ့သူ
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကား တစ်စီး လုံးကို စားပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ နာမည်ကတော့ Leon Sampson လို့ ခေါ်ပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာတွေကို စားပြလို့ နာမည် ကြီးနေသူ တစ်ယောက်ပါ ။ ( ၁၉၇၀ ) ခုနှစ်မှာတော့ Sampson ဟာ ကားတစ်စီး ကို စားပြနိုင်တယ်လို့ ဒေါ်လာ ( ၂၀၀၀၀၀ ) ကြေး အလောင်းအစား လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ အလောင်းအစား မှာတော့ Sampson တစ်ယောက် မယုံနိုင်လောက်အောင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
Smapson ဟာ ကားတစ်စီးလုံးကို ကုန်အောင် စားဖို့အတွက် အချိန် ( ၁ ) နှစ် လောက်ယူခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ စားပုံကတော့ ကားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သေးသေးလေး ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ပြီး စွပ်ပြုတ်ထဲ ထည့်သောက်ခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ ကြိတ်ချေထားတဲ့ အာလူးတွေ နဲ့ ကား အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရောပြီး စားခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒီလို စားတဲ့ အခါမှာလည်း ကားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ဆန် တစ်စေ့ အရွယ်အစား ထက်မကြီးအောင် သေချာစွာ လုပ်ပြီးမှ တစ်ခြား အစားအစာတွေနဲ့ ရောပြီး စားခဲ့တာပါတဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ စီးကရက်ပေါင်း များစွာကို စားခဲ့သူ
အခု နောက်ဆုံးပြောပြပေးမှာကတော့ စီးကရက်တွေကို စားပြခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ နာမည်ကတော့ Chaz Chase ဖြစ်ပြီး သာမန်လူတွေ ဖွာရှိုက်ကြ တဲ့ စီးကရက်တွေကို အေးဆေး စားပြခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ ။ သူ့ အကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ( ၁၉၂၀ ) ခုနှစ်တွေတုန်းက Chaz ဟာ စီးကရက် နဲ့ ဆေးပြင်းလိပ် တွေကို စားနိုင်သူ တစ်ဦး အဖြစ် နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ခါတုန်းကိုဆိုရင် Chaz ဟာ ဩစတေးလျနိုင်ငံကို အလည်သွားရောက်ခဲ့ပြီး လေဆိပ်အရောက်မှာတော့ အကောက်ခွန် အရာရှိတွေရဲ့ တားဆီး ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အကြောင်းကတော့ Chaz နဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ စီးကရက် နဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်တွေ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး အရာရှိတွေက Chaz တစ်ယောက် ဒီဆေးလိပ်တွေကို ရောင်းချဖို့ ယူလာတာလို့ ထင်ခဲ့ကြတာပါ ။ ဒီအချိန်မှာပဲ Chaz ဟာ သူ နဲ့ အတူ ပါလာတဲ့ စီးကရက်ဘူးထဲက ဆေးလိပ် တစ်လိပ်ကို ထုတ်ပြီး မျိုချပြလိုက်တဲ့ အခါကျတော့မှသာ အကောက်အခွန်အရာရှိတွေက Chaz ကို စီးကရက်တွေ ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ မှတ်တမ်းတွေ အရတော့ Chaz ဟာ သူ့ရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ စီးကရက် ပေါင်း ထောင်နဲ့ ချီ ပြီး စားပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ သာမန်မဟုတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသောက်ပြီး အသက်ရှင်နေကြတဲ့ လူ ( ၅ ) ဦး အကြောင်းကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ပိရမစ်တွေ တည်ဆောက်တဲ့ လျို့ဝှက်ချက် နည်းလမ်းကို တွေ့ရှိခဲ့သူတစ်ဦး
တစ်မိနစ်ကို (၂၈) ကြိမ်နှုန်းနဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးကြိုး အပစ်ခံနေရတဲ့ မြို့တစ်မြို့အကြောင်း
သင်မသိသေးတဲ့ လေယာဉ်မယ်တွေရဲ့ အံ့သြစရာ လျှို့ဝှက်ချက်များ